MS-DOS mitambo inowanikwa yekutamba kubva kubhurawuza rako Linux Vakapindwa muropa
Vhidhiyo emulators emitambo zvirongwa izvo zvinogara zviri pakati pevanonyanya kutsvakwa mune chero chitoro cheapp. ZveLinux isu tine zvese, seyakakurumbira MAMA kana vamwe vakaita Vice watinogona kutevedzera ese marudzi ese eCodore macomputer mapurogiramu. Kugona kushandisa akawanda emulators zvinodikanwa kuti isu tiise iyo chirongwa, asi kune zvekare zvimwe zvinotibvumidza nakidzwa nemitambo yakawanda kubva pawebhusaiti yedu.
Ave ari mukati archive.org kwavakaunganidza zviuru zve MS-DOS mitambo. Muchokwadi, vanga vachizviita kwenguva yakareba uye izvozvi pane angangoita 7.000 mitambo inowanikwa, ese ari kuwanikwa kubva kune webhu browser. Zvatinazvo ndeekupedzisira emulator DOSBOX iyo yatinowana kubva kuFirefox, Chrome kana chero chero imwe bhurawuza uye kubva patinogona kutamba zvinoita sekunge tiri pamberi pePC kubva kuma90s.
Classic PC mitambo mubrowser yako
Dambudziko guru randakasangana naro pakuyedza mimwe mitambo ndizvo chaizvo zvandisati ndasangana nazvo: hapana muchiSpanish. Kune rimwe divi, zvimwe zvese zvakafanana nezvazvaive makore anodarika makumi maviri apfuura: kana mutambo wasarudzwa uye watangwa, tinofanirwa kumirira kuti "ugadzire", kunyangwe izvo zvatichaita chaizvo download mufananidzo. Kamwe kwadzokororwa, isu tinopinda mumutambo, kwete usati watanga kusarudza kadhi redu rezwi kana kumwe kumisikidzwa.
Kana isu tatanga mutambo, senge imwe yaLarry yandakatamba, tinoona kuti vachiri nechimwe chinhu chekuvandudza. Kunyangwe ini ndisingazonyunyute nezve iwo mufananidzo wavanopa, ini ndinogona kutaura kuti ruzha haruende nguva dzose sezvaitarisirwa. Asi, uh, isu tiri kutaura nezve emulator yemitambo iyo isu tinoita mu browser; zvichava nani.
Mune runyorwa rwemitambo kune akawanda akakosha kutora tarisiro yekurangarira kuti zvinhu zvaive sei imwe nguva yapfuura, senge Discworld kana dzakawanda shanduro dze PC nhabvu, mutambo uyo, kana ini ndichirangarira nenzira kwayo, waitengeswa pama kioski uye poindi yayo inonakidza yaive manejimendi ezvikwata.
Ini ndinokurega iwe uone kana ndichigona kutengesa Ronaldo uye kuti hupenyu hwangu huve hwakaoma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Anenge zviuru mazana manomwe zvemitambo yeMS-DOS inowanikwa yekutamba kubva kubhurawuza rako
Zvakanaka! Ndatenda! Ndinoda iyo mitambo.